Ulujonga njani uMqoqo wakho weFoto kunye neWindows 10 yeeFoto zeApp
Xa ivuliwe, Windows 10 usetyenziso lweefoto luzithathela ngokuzenzekelayo iifoto zakho kwaye uzibeke kwiscreen kwizithonjana ezinkulu, zilungiswe ngumhla owazithathileyo. Oko kwenza kube lula ukubonisa iifoto zekhefu zakutshanje kwithebhulethi, kwi-smartphone, okanye nakwikhompyuter ebotshelelwe kwiTV okanye esweni esikhulu.
Uhlelo lokusebenza lwenza iifoto ezifihlakeleyo xa uzibonisa, ukonyusa amanqaku aphezulu kunye nokuzolula ezo hilons zitshixekileyo.
Ukuqalisa usetyenziso lweefoto kwaye uqalise ukubonisa iifoto zakho, landela la manyathelo:
Ukusuka kwimenyu yokuQala, cofa ithayile yeefoto.
Iifoto ze-app ziyavela ngokukhawuleza, ziboniswe kulo mzobo ulandelayo. Iifoto ze-app zikhangela iifoto kwifolda yemifanekiso yekhompyuter yakho, kunye neefolda zakho ze-OneDrive, kwaye uzibonisa iqela elinye, zonke ngokulandelelana kwazo.
Inkqubo yeefoto ikwavela xa uvula ifoto kuMlawuli weFayile kwidesktop.
Uhlelo lokusebenza lweefoto lubonisa iifoto ezigcinwe kwikhompyuter yakho nakwi-OneDrive.
Skrolela ezantsi kwifoto ofuna ukuyijonga okanye uyihlele.
Uhlelo lokusebenza lweefoto lubonisa iifoto zakho kumjelo omnye omde, ngaphandle kweefolda. Kubizwa ngokulula Ukuqokelela, Iskripthi somboniso ubeka iifoto zakho ezisandula ukudutyulwa phezulu, kunye nezindala ezisezantsi.
Skrolela ezantsi ngemouse ngokusebenzisa iscroll bar ecaleni kwenkqubo engasekunene. Kwiskrini sokuchukumisa, tyibilikisa nje umnwe wakho phezulu okanye ezantsi kwiscreen ukubona iifoto ezintsha okanye ezindala.
Cofa ifoto ukuze uyibone ngokupheleleyo-kwaye ukhethe nayiphi na imenyu ukuze ujonge, uhambe, usebenzise, ​​okanye wabelane ngemifanekiso yakho.
Xa ifoto igcwalisa iscreen, njengoko kubonisiwe apha, ngamanye amaxesha amamenyu afihliwe. Ungazisa iimenyu ngokuhambisa imouse yakho okanye ucofe (okanye ucofe) ifoto.
Cofa nayiphi na kwezi ndawo ukwenza imisebenzi eyahlukeneyo ngelixa ujonga ifoto.
Xa iimenyu zivela, ungalawula usetyenziso kunye neefoto ngeendlela ezahlukeneyo:
Ifoto elandelayo / edlulileyo: Hambisa imouse yakho naphi na efotweni, kwaye iintolo ziyavela kwimiphetho yasekhohlo nasekunene. Cofa utolo lwasekunene ukuze ubone iifoto ezintsha okanye ucofe utolo lasekhohlo ukuze ubone iifoto ezindala.
Buyela kwingqokelela: Buyela kwi-thumbnail yokujonga iifoto zakho ngokunqakraza utolo olukhombe ngasekhohlo kwifoto yekona ephezulu ngasekhohlo. (Kuya kufuneka ucofe okanye ucofe ifoto ebonisiweyo ngaphambi kokuba ivele.)
Yabelana ngefoto: Cofa kwiqhosha lokwabelana ukuze wabelane ngefoto kunye neeapps ezinokuphatha umsebenzi. (Amathuba alungile ukuba i-imeyile ye-imeyile ivele, ilungele ukuthumela i-imeyile ifoto kwindawo oya kuyo.)
Umboniso weSilayidi: Ukucofa eli qhosha kucoca isikrini, emva koko usetyenziso luqale ukukhwela ibhayisikile kuzo zonke iifoto zakho, zibonisa nganye kangangemizuzwana emihlanu ngaphambi kokuba uye kwelandelayo. (Cofa nayiphi na ifoto ukumisa umboniso wesilayidi.)
Ukuphucula: Uhlelo lokusebenza lwefoto luziphucula ngokuzenzekelayo iifoto zakho ukuze zibonakale zintle. Cofa indawo yokuphucula ukucima ukongeza ukuba ucinga ukuba ijongeka ngcono Yendalo .
Hlela: Oku kuzisa imenyu entsha yokuhlela ifoto ebonwayo ngoku. Cofa u-X kwikona ephezulu ngasekunene ukuze uphume kwimenyu yokuhlela.
Jikelezisa: Oku kujikelezisa ifoto yakho ngokwewotshi ngama-90 degrees; ukujikeleza kwelinye icala, cofa kathathu.
Cima: Ukuba ubona ifoto engacacanga, cofa le icon ukuyicima kwangoko. Akukho ngqondo ukuyigcina ijikeleze.
Imenyu engakumbi: Ukucofa kula machaphaza mathathu kuzisa imenyu entsha, eboniswe kuMzobo 17-6 ngaphambili. Le menyu ikuvumela ukuba ukope okanye uprinte isithombe, usete njengekhompyuter yakho yokukhiya isikrini, kwaye ubone iinkcukacha ezinjengegama lefoto, ubungakanani, umhla othathiweyo, isisombululo, kunye nolwazi olufanayo.
Sondeza: Cofa la maqhosha amancinci asezantsi, kwikona esekunene ukusondeza okanye ukuphuma kwifoto.
Ukuphuma kwi-app yeefoto, cofa u-X kwikona yayo ephezulu ngasekunene.
Insiza iyazicoca kwiscreen.
g3721 ngexabiso lesitalato ipilisi eluhlaza okweqanda
elinye igama le-cetirizine
iintlungu phantsi kozipho nomnwe
r180 ipilisi embhoxo emhlophe